WALIIN DUBBII GAGGABAABOO KANAAN BOHAARAA….. – Beekan Guluma Erena
WALIIN DUBBII GAGGABAABOO KANAAN BOHAARAA…..	Beekan Erena
Poems August 2, 2016OROMO
Kaabinee Habashaaf kan OPDO
Guyyaa tokko kaabinoota Habashaa (KH) fi Kaabinee OPDO (KO) tu walgahii Wayyaaneef magaalaa Finfinneetti waamamam jedhama.
KH: Waa’een Fincila Oromiyaa keessatti qabate kana maalirra gahee jira?
KO: Oromoon akka durii miti amma humna keenyaa ol ta’ee jennaan Loltuu Wayyaanee itti gadi lakkisnee jirra?
KH: Hanga ammaatti namoota meeqatu wareegame? Daataa qabatamaa of harkaa qabdu?
KO: Akkuma miidiyaa warra biyya alaa kanaarraa hafuura dhokfannee ilaalaa jirrutti gara nama 700 ol wareegamaniiru. Kumni 100 ol madaa’aniiru, miliyoona walakkaa kan ta’an ammo mana hidhaatti darbatamniiru, kuma 100 ol kanta’an ammo biyyaa baafamaniiru.
KH: Yeroo Wayyaaneen akkas isin gootu maaf calluma jettani ilaaltuu? Torbanuma lama darbe kana waan nuti loltoota Agaazii magaalaa Gondor’tti guyyaa lama gidduutti goone hin argine isin?
KO: Nuti tarkaanfii ija jabeessa akkasii fudhachuu nisodaanna; Wayyaaneen tokko tokkoon halkaniif guyyaa bilbilaan nudoorsisaa jirti; xiqqooshee dhaloota qubee jedhaman kanatu yeroo aaraan tarkaanfii fudhataniitu achumaan wareegamu male. Nummoo dhugaan siin jedha garaa keenyaaf jiraanna malee, seenaafi sabaaf jiraachaa hinjirru. Erga Oromiyaa kana loltoota Wayyaaneef dabarsinee kenninee kunoo waggaa ta’uuf jedha. Nutuu har’a qabamnaa; bor qabamnaa; har’a duunaafi bor duunaa keessa oolla. Waan nuun jedhan qofa hojiirra oolchuu qofa jedheen.
KH: Fuulduratti maal mala dhahaa jirturee gama keesanitiin. Dubbiin amma ka’e kunoo waan gadi galu miti. Dhiigni dhangala’eera; lubbuun badeera; mee malli keessan maaliree? Yookaan maaf isinis biyya gadi lakkistanii hinbaatan yookaammoo qabsootti makamtanii wayyaanee kana aangoorraa ariitanii iddoo qabachuuf hin yaaltani? Utuu isin gaaf tokko miidiyaadhuma keessan isa abbaa sobaa TVO jedhamu Adaamaa jiru sanaan labsii waraanaa labsitani uummanni naannoo kanaayyuu shimalaan dhufee masaraa mootummaa dhuunfachuu danda’aam.
KO: Nuti duris isaanumatu of jalatti nubixxile malee dhaaba of danda’ee jiraatu miti. Yoo nu warra kaabinoota olaanoo madda keenya qoratte walakkaan keenya gara keessan (amaara jechuukooti); walakkaan ammoo Oromoofi Afaanuma Oromoo dandeenya. Ijoollee keenyallee mana barumsaa Afaan Amaaraa galfannee barsiifataa jirra; kanaafuu utuma haqa iddoosheen jirtu beennuu kunoo Wayyaanota barattoota Oromoo qaroofi xobbee kana dabarsinee bineensa kanaaf laachaa jirra.
KH: Isa gaarii gootani; afaan’xinti zemenaatuu..afaan maddi qubeesaa ‘gi’iizii-hager beqel’ ta’e dhiiftaniitu silaas qubee ABO kaleessa fidetti maaltu isin rakkise?. Utuu dubbannuu kana booda waa’een qabsoo Oromoo sodaachisaadha. Nullee isin bilisoomtanii abbaa biyyaa taatanii jennaan; rakkoo guddaa keessa seenna bar. Oromoon nama barate baay’ee waan horateef Afriikaayyuu bulcha jennee gugungumaa jirra paartii keenya faana.
KO: Muu atimmoo kanbaratee? Kan barate Qilinxoofi Qaallitiitti gursiisiifnee jirra; kan isheerra a hafte ammo biyyaa ariineerra; ishee face book’ irraa wacabbaraa jiru kanammoo tokko lamaan itti adeemaa jirra; Haata’u malee amma garatti gorru wallaalaa jirra; nutuu yeroon dafnee gara FXG kanaatti dabalamuuf murteeffataa jirra; karaan nuti irra turre marti soba ta’uu utuma beeknuu cubbuu baay’ee; soba danuu dalganeerra; miidiyaa hundeeffanne tokkoon soba itti gadi guuruu kana uummanni dammaqeetu kunoo miidiyaalee hawaasaa maraan sobni keenyaa addunyaa guutuurratti firfirfamaa jira; amma miidiyaa keenyaa Oromoon 2% hordofaa akka hinjirre qorannoo dhiyoo kanaan mirkaneeffannee jirra.
KH: Durayyuu isin goowwoota haataatani garraamota haataatani baay’ee nama dhibdu. Poolisii keessantu barattoota keessan kan Oromootti qawwee galagalchee itti dhukaasee ajjeese kan jedhan ‘face book’ rraa argeen isin taajjabe. Isin nama dhibduum. Nuti poolisoota keenyaaf akeekkachiisa guddaa laanne; yoo dubbiin jabaattellee loltoota agaazii Wayyaanee wajjin lola ifaa ifatti banuuf qophoofne turre. Isin kuni baay’ina keessaan haata’u hinbeeku malee durumaa warri duriis qaama keessan dadhabaatti gargaaramuun isin cabsaa turan…Goobanaa Daaccee…Jaagamaa Keelloo..kkf..Har’aaan kanammoo..himmm afaankootti haahafu.
KO: Keenya baranaa waaqumatu beeka; mee beenu walgahiitti ol deebinaati; yoona sakuriitiin Wayyaanee da’oo teessee nulalaa jirtii…zimm—cal…
Walgahii booda kutaa 2ffaatu jira.
Beekan Gulummaa Irranaa-Adoolessa, 2016
← WHO IS FIKADU MEGERSA? -Owener of Ayantu.net-Seenaafi hojiisaa gaggabaabinaan!
SEENAA GOOTICHA SALAALEE AGARII TULLUU -Lammii Girmaa Tasammaa →